ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): မအိပ်ဘဲ နေတဲ့အခါ ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): မအိပ်ဘဲ နေတဲ့အခါ ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ?
မအိပ်ဘဲ နေတဲ့အခါ ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ?
အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေး အတွက်၊ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အရေးပါ လှတယ် ဆိုပေမဲ့လည်း ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိပ်ရေး ပျက်ရတဲ့ ညတွေကို ကြုံဖူး ကြမှာပါ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ညလုံး မအိပ်ရတဲ့ ညတွေ ရှိသလို နာရီ အနည်းငယ် လောက်ပဲ အိပ်လိုက် ရတာ မျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက် တာဟာ ဘယ်ရှုထောင့်က ကြည့်ကြည့် မကောင်း လှပါဘူး။ မအိပ်ဘဲ နေရတဲ့ အခါ ဘာတွေ ဖြစ်လာမယ် ထင်ပါသလဲ။
၁။ တစ်ရက် မအိပ်ဘဲ နေရင် သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ယိုင်နဲ့ လာမှာ ဖြစ်ပြီး အာရုံ စိုက်နိုင်မှုလည်း လျော့လာမှာပါ။ သွေးထဲမှာ အယ်လ်ကိုဟော ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ရေရှည်မှာ ဦးနှောက် မှတ်ဉာဏ် ထိခိုက်နိုင် ပါတယ်။
၂။ နှစ်ရက် မအိပ်ဘဲ နေလိုက်ရင်တော့ သင့် ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ အောက်ဆီဂျင် သိသိသာသာ နည်းလာ ပါလိမ့်မယ်။ အားအင် ချိနဲ့ လာမှာပါ။ စကားတွေ ထစ်လာနိုင်ပြီး ပြောနေကျ စကားလုံးတွေ မေ့လာနိုင် ပါတယ်။
၃။ သုံးရက်ကြာတဲ့ အခါ အရာရာကို အာရုံ စိုက်ဖို့ အတော်လေး ကြိုးစား လာရပါပြီ။ အဆင် မပြေတာာ ကြုံတဲ့ အခါ အလွယ် တကူ လက်လျှော့ ချင်လာ တတ် ပါတယ်။ နှလုံးခုန်တွေ မြန်လာပါမယ်။
၄။ လေးရက် ဆက်ပြီး မအိပ်လိုက် ရင်တော့ သင့်ရဲ့ဦးနှောက်က အိပ်မောကျလု နီးနီးဖြစ်လာပါပြီ။ လူက မအိပ်ပေမဲ့ ဦးနှောက်က အလုပ် မလုပ် သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဦးနှောက်က ခိုးခိုး အိပ်နေတာ ၅ စက္ကန့် ကနေ ၁၀ စက္ကန့်လောက် ကြာတက် ပါတယ်။ အရိပ်တွေ နှစ်ထပ် ဖြစ်လာပါမယ်။
၅။ ငါးရက် ဆက်တိုက် ဆိုရင်တော့ တွေးခေါ် နိုင်စွမ်းနဲ့ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းဟာ လုံးလုံး လျော့ကျ လာပါပြီ။
၆။ ခြောက်ရက်မြောက် ဆိုရင်တော့ အိပ်ရေး ပျက်ခြင်း စိတ်ဝေဒနာ စတင်ပြီလို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။ ထင်ယောင် ထင်မှားတွေ စဖြစ်လာပါပြီ။
၂၀၁၅ တုန်းကဆိုရင် သုံးရက် ဆက်တိုက် မအိပ်ဘဲ နေလိုက်တဲ့ အမျိုးသား တစ်ဦး နှလုံးရပ်ပြီး သေဆုံး ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Photos : magicbulletblog.com
Posted by Te Tee at 12:08 AM